​फुटबल टोलीका युवा स्ट्राइकर विमल घर्ती मगरकी बहिनीको हत्या
काठमाडौं । नेपाली फुटबल टोलीका युवा स्ट्राइकर विमल घर्ती मगरकी बहिनीको हत्या भएको छ । विमलकी बहिनी १७ वर्षीया मनिषा नवलपरासीको बर्दघाट ८ भुताहस्थित आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् ।..
त्रिपुरेश्वर-कलंकी सडक विस्तार तत्काललाई रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । त्रिपुरेश्वर-कलंकी सडक विस्तार आयोजनामा तत्काल केही नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। रामशरण डंगोल समेतको उत्प्रेषण मुद्दामा कामु प्रधानन्यायधीश शुशीला कार्कीको एकल इजलासले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश दिएको..
सुरक्षाको बहानामा पूर्वपदाधिकारीका लागि प्रतिव्यक्ति ४० लाख खर्च
काठमाडौं । सुरक्षाको बहानामा राज्यको ढुकुटी नै रित्याउने गरी बाँचुन्जेल सुविधा प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिलाई संसदीय समितिले निरुत्साहन गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, सुशासन समितिको मङ्गलबारको बैठकमा पूर्वपदाधिकारीले प्राप्त गरिरहेको..
भारतीय र अमेरिकी नक्कली नोटसहित आठ जना पक्राउ
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जले १९ लाख ८७ हजार वरावरको भारतीय जाली नोटसहित ७ जना र १९ हजार पाँच सय जाली अमेरिकी डलर सहित..
​यार्सा टिप्न विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक र विद्यार्थी लेकतिर, स्थानियलाई नि:स्शुल्क अन्यलाई ३ हजार
नारायण ढुङ्गाना रुकुम । रुकुमको रन्मामैकोटकी कक्षा २ मा पढ्ने ११ वर्षीया जोथना विक डोकोमा कपडा राख्दैछिन्। यार्सा टिप्न एक महिनासम्म लेकमा बस्ने भएकाले जाडोमा लगाउनेदेखि खाने बस्नेको बन्दोबस्तको तयारीमा छिन्..
राजधानीमा दुई हजार बालिका यौन व्यवसायमा, वर्षमा १२ सय जना बेचिन्छन्
काठमाडौं । राजधानीमा झन्डै दुई हजार बालिकालाई यौन व्यवसायमा लगाउने गरेको पाइएको छ । केन्द्रीय बालकल्याण समितिले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा दुई हजार बालिकालाई ग्राहकलाई यौनसेवा प्रदान गर्न..
सय ठगले तीन घण्टामा स्ट्याण्डर्ड बैंकको डेढ अर्व रुपैया चोरी गरे, प्रहरी बल्ल खोज्दै ठग
एजेन्सी। ठगहरुको एउटा समूहले जापानमा जाली क्रेडिट कार्डको सहयोगमा एटिएमबाट एक अर्व ४० करोड येन(एक अर्व ३६ करोड रुपैयाँ) झिकेका छन्। जापानको समाचार संस्था क्योदोकाअनुसार यो रकम सय जनाको समूहले तीन..
​०४५ सालको नाकाबन्दीमा थन्क्याइएको सामान सरकारी गोदाममा,२८ वर्षपछि फेला पर्यो
धनगढी । सामान्यत: गोदाममा कति समयसम्म सामान राखिएलारु सामानको प्रकारअनुसार केही दिन, महिना र बढीमा केही वर्ष१ धनगढीमा भने २८ वर्षदेखि गोदाममा सामान थन्क्याई राखिएको छ। त्यही पनि २०४५ सालको..
नेपाल-भारत सीमा बजारमा बम विष्फोट, २ को मृत्यु
कावासोती । नवलपरासीसँग सीमा जोडिएको भारतको ठुटीबारी बजारमा बम विस्फोट हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन् । ठुटीबजारमा नेपालीहरुसमेत किनमेल गर्न जाने गर्दछन् । भारतको..
के अर्थमन्त्री पौडेलले मान्लान् ? डा. बाबुराम भट्टराईको ९ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले आगामी बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीसमक्ष ९ बुँदे लिखित सुझाव दिएका छन्। बजेट निर्माणका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग अर्थमन्त्री पौडेलले सुझाव..
चीन–नेपाल– भारत सम्बन्ध : अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन
काठमाडौं । चीन–नेपाल–भारत सम्बन्धका प्रमुख प्रवृत्ति र नेपालको नवीन विकासका रणनीति विषयक दुईदिने अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन बिहीबार शुरु भएको छ । साउथ एसियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेण्ट (सियाम), इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेण्ट स्टडिज्..
​मोदीको विरोधमा कांग्रेसले गर्‍यो नेपाललाई जोडेर ट्विट
काठमाडौँ । नेपालको विषय अब भारतको आन्तरिक राजनीतिमा पनि एउटा प्रमुख मुद्दा बन्न पुगेको छ। भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले बुधबार नेपाललाई जोडेर आफ्नो आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलबाट एउटा..
एउटै सांसदलाई ३.५ करोड रुपैया, राज्यलाई १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ भार
काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३ करोड र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकसका नाममा..
​विश्वमा नपाईने हिन्दूहरुले पुजा गर्ने कालीगण्डकी नदीको शालिग्राम कहाँ जाँदैछ ?
म्याग्दी । विश्वमै अत्यन्त दुर्लभ मानिएको बहुमूल्य धार्मिक शिला शालिग्राम चोरी सिकारीका कारण कालीगण्डकी नदीबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । संसारभरि अन्त कतै नपाइने तर कालीगण्डकी नदीको कागबेनीदेखि रिडी ९गुल्मी०..
​तेल बेच्दा ठगी गरेको आरोपमा पेट्रोल पम्पका संचालक जेल चलान
बनेपा । उपभोक्ता ठगेको आरोपमा काभ्रेपलाञ्चोकमा थप एउटा पेट्रोलपम्पका सञ्चालकलाई पूर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ । नारायण आयल स्टोर, जनगालका सञ्चालक धनश्याम खत्रीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले थुनामा राख्न आदेश दिएको..
हामी आफैँ पानीजहाज किन्छौँ, ‘हिन्द र प्रशान्त महासागरमा झन्डा गाडेर गुड्ने - प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली आफैँले पानीजहाज किन्ने बताएका छन् । मङ्गलबार अखिल नेपाल महिला सङ्घको राष्ट्रिय परिषद्को प्रथम बैठक उद्घाटनपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ पानीजहाज किनेर तीन..
​आन्दोलन सिंहदरबारमा, चेकजाँच मुग्लिङमा ? अकस्मात् चेकजाँच, ६ घन्टा जाम
चितवन । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखन्डमा भएको सवारी जामका कारण सर्वसाधारणले सास्ती ब्यहोर्नुपरेको छ । प्रहरीले चितवनबाट आउने सवारी–साधनलाई मुग्लिङमा रोकेर सोमबारदेखि चेकजाँचमा कडाइ गरेसँगै राजमार्गमा जाम बढेको हो । मधेसी मोर्चासहितको..
​प्रत्येक बजेट भाषणमा घोषणा हुने तर नपाईने कर छूट सीमाको सहुलियत, किन हुन्छ यस्तो ?
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले कर्मचारीलाई आयकरमा दिँदै आएको कर छुट सीमाको सहुलियतमाथि विवाद देखिएको छ । आयकर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि दुईलाख ५० हजार र दम्पतीका लागि तीन लाख तोकिएपनि..
​सरकारले भुकम्प पिडितलाई वितरण गर्न ११ जिविसलाई ११ अर्ब ११ करोड ६० लाख निकासा गर्यो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अनुदान वितरणका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई १२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। सो रकमबाट केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन..
​गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम प्रभावकारी : विश्व बैङ्क
काठमाडौँ। आदिवासीको उत्थानसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममध्ये गरिबी निवारण कोषद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको विश्व बैङ्कले बताएको छ । विश्व बैङ्कले संसारभर सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको मूल्याङ्कनका आधारमा हालै आफ्नो वेभसाइटमा प्रकाशित आलेखमा..
​इन्जिनियरले १५ हजार घुस नपाएपछि भुकम्पले पिडितको सूचिमा नामै छुटाइदिए’
प्रशन्न पोखरेल गोरखा । “तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आएका इन्जिनियरले मलाई कोठाभित्र बोलाए, म पूर्व वडाध्यक्ष हुँ भन्ने थाहा पाएका उनले गाउँलेसँग १४र१५ हजार रुपैयाँका दरले पैसा उठाएर आफूलाई दिएमात्रै अनुदान पाउनयोग्य..
​नेपालमा सधैंजस्तो कुनै न कुनै रुपमा भारतीय हस्तक्षेप हुँदै आएको छ : प्रा डा बराल
काठमाडौं । भारतका लागि नेपाली राजदुतसमेत रहिसकेका प्रा डा लोकराज बरालले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै न कुनै रुपमा सधैँजस्तो भारतको हस्तक्षेप हुने गरेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतवार आयोजना..
​सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा बहुमतले पारित
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदले आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ का लागि सरकारले प्रस्तुत् गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख २६ गते सदनमा प्रस्तुत् गरेको सरकारको नीति तथा..
​‘ओबामालाई ह्वाइट हाउसअगाडि झुन्ड्याउनुपर्छ’ -ट्रम्पका सहयोगी बताउने सेनेकाल
काठमाडौं। अमेरिकी सरकारले राष्ट्रपति ‘बाराक ओबामालाई ह्वाइट हाउसअगाडि झुन्ड्याउनुपर्ने’ भन्ने जस्तो घृणित अभिव्यक्ति दिने एन्थोनी सेनेकालमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । आफूलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पका सहयोगी बताउने सेनेकालले ‘ओबामा..
​४६ वर्षपछिकै सवै भन्दा ठूलो वर्षा हिजोको, सल्यानमा लाखौंको क्षति
सल्यान । सल्यान जिल्लामा बिहीबार बेलुका ४६ वर्षपछिकै ठूलो वर्षा भएको छ। भीषण वर्षाले वाफुखोला गाविसमा लाखौँको क्षति पुगेको छ। वर्षापछि आएको बाढीले वाफुखोला–३ मा रहेको दोभान बजारमा रहेका १२ वटा..
​२५ हजार लाइसेन्स–ब्लुबुक निलम्बन हुँदै
काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लंघनपछि कारबाहीका लागि ट्राफिक प्रहरीले लिएको कागजपत्र एक महिनाभित्र फिर्ता लिनुपर्ने भएको छ । नत्र चालकका लाइसेन्स तथा ब्लुबुक निलम्बन हुने र थप जरिवाना तिर्नुपर्ने ट्राफिक..
२ वर्षपछि ९ शेर्पा सगरमाथाको चुचुरोमा पुगे, भोलिदेखि विदेशी चढ्ने
​काठमाडौँ । पोहोर वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसअघिको वर्षमा हिमपहिरोका कारण लगातार दुई वर्ष रोकिएको सगरमाथा आरोहण आजदेखि सुचारु भएको छ। नेपाली नौ जना शेर्पा आरोहीले आज साँझ ५ बजेर..
​देशको विभिन्न दश ठाउँमा रहेका इन्धनको तत्कालै अन्वेषण गरिने
भक्तपुर । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले दैलेखमा रहेको इन्धनको अन्वेषणका लागि चिनियाँ टोली पुगिसकेको र नेपालका अन्य १० ठाउँमा रहेका इन्धनको समेत तत्कालै अन्वेषण गरिने बताएका छन्। रफत सञ्चार क्लबले आयोजना गरेको..
नगर विकासबारे अध्ययन गर्न महानगरपालिकाको टोली चीन गयो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिको एक प्रतिनिधिमण्डल आज छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन गएको छ । गोन्जाउ नगरको निमन्त्रणामा महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा स्थानीय निकायका विज्ञको सात सदस्यीय टोली आज..
​डीडीसीका प्रबन्ध निर्देशक साहविरुद्ध मुद्दा, झन्डै साढे दुई करोड भ्रष्टाचार गरेको दाबी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा दुग्ध विकास संस्थानका प्रबन्ध निर्देशक डा शत्रुघ्नप्रसाद साह र उनकी श्रीमती सुशीलाकुमारी शाहविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको..
Results 1994: You are at page 49 of 67